Ny lalao android 39 tsara indrindra hilalaovana amin'ny namana amin'ny Internet | Androidsis
Manolotra anao izahay anio ny lalao Android tsara indrindra nilalao niaraka tamin'ny namana an-tserasera. Fotoana mahafinaritra ahafahana mifanerasera amin'ny lalao mahery vaika sy milamina na misy lohahevitra manokana aza izay mahatonga antsika hahatsapa ho mangatsiaka.
Andao hataontsika amin'io lisitry ny lalao ankehitriny tena tsara indrindra mahatsapa fa milalao amin'ny olona iray isika na miatrika vondron'olona mpilalao marobe.
1 MATY I DAYLIGHT MOBILE
2 Kintana ady hazakazaka
7 GRID ™ Autosport - An-tserasera
9 Ekipa Dino
10 Tanànan'i Salema - Ny fanekena
12 Kintana Brawl
17 fifandonana Royale
19 Antso an'ny Duty®: finday
21 Fihazakazahana amin'ny échec
25 FONDRAN'ANDRIAMANITRA Uχ Làlana maizina
26 Fitaovana finday mainty
27 Mahery & majika: Chess Royale
31 EEme EE
32 League of Legends: Rifala Biby
33 Tantaran'i Runeterra
34 Fomba Genshin
35 LEGENDS SMASH
36 GWENT: Ny lalao Karana Witcher
37 Magic: ny kianja Fivoriana
39 Akon'ny bala
MATY I DAYLIGHT MOBILE
Una traikefa mahatsiravina an-tserasera multiplayer tsy manam-paharoa hilalao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao amin'ny iray aminareo no mety ho ilay lehilahy ratsy fanahy sarimihetsika mahazatra toy ny A Nightmare on Elm Street. Lalao mampientam-po amin'ny estetika manjombona, mampatahotra, sary ary sary voalohany.
Halfbrick Studios no nitondra izany taminay Multiplayer an-tserasera ny platformer tonga lafatra hanana lalao haingana miaraka amin'ny mpiara-miasa tsy misy afa-tsy ireo fahatsapana fanetren-tena ireo. Sary araka ny natao tamin'ity fandinihana ity hitondra ny endri-tsoratra fantatrao indrindra amin'ny horonan-taratasy.
La fara tampon'ny saga lalao fifaninanana, fa paikady simulasi izay tsy maintsy naha-talen'ny ekipa Formula 1. Tamin'ity indray mitoraka ity dia entin'izy ireo an-tserasera ity mba hahafahantsika mifaninana amin'ny hafa ary hampiseho hoe iza no manana ny faharanitanay sy ny fahaizanay mitantana ireo mpamily anay amin'ny asany.
Developer: Lalao Playsport
Iray amin'ireny lalao izay nivoaka teo ambanin'ny aloky ny Clash Royale, saingy tsy midika izany fa tena tsara ary mametraka antsika eo alohan'io endrika 1v1 mitsangana io izay ilantsika ny karatra faran'izay tsara handroso tsara. Lalao ho an'ireo niara-dia tamin'ny Supercell tafahoatra.
Lalao hafa mifaninana amin'ny Internet ary izay ahafahantsika mamely fa miaraka amina mpiara-miasa amin'ireny sarintany fomba fijery izay tsy maintsy hitsambikina tsy mbola nisy toy izany isika ary hitokona amin'ny fotoana mety. Betsaka ny endri-tsoratra sy votoaty marobe hamaha amin'ny iray amin'ireo multiplayer amin'izao fotoana izao.
ankehitriny hiezaka haka aina kely izahay miaraka amin'i Tetris, na dia miaraka amin'ny ady an-trano sy ny maody mifaninana aza, toy ny 1v1 hilalao lalao miaraka amin'ny mpiara-miasa iray, rehefa mandeha ny minitra dia hanomboka kely ny fihenjanana hahafahana mamoha ny laharana sy ny laharan'ny taila.
Developer: Ny orinasa N3TWORK Inc.
GRID ™ Autosport - An-tserasera
izahay tena talohan'ny fitsapana beta maimaim-poana an'ny iray amin'ireo simulator tsara indrindra mitondra fiara amin'ny Android. Amin'ity tranga ity dia tsy mila mandoa vola isika, fa nampihena ny maody hitsapana ny hazakazaka amin'ny mpilalao hafa. Eto ianao dia afaka mahatsapa saika ny fotaka izay mamely ny volana amin'ny fiaran-dalamby.
GRID ™ Autosport - Fitsapana Multiplayer an-tserasera
Uno amin'ireo lalao hafahafa indrindra ao amin'ilay lisitra ary amin'izany dia ho afaka hiatrika lehilahy plastika mitam-basy izahay. Ny fiheverana ny fizika ny zavatra izay manao ny zavatra mba hahatsapany na dia misy bala aza mamely ny toetrantsika ary tena miteraka valiny amin'ny fizika izany.
Si buscas lalao shooter dinôzôro, Dino Squad no fifanarahana tsara indrindra amin'izao fotoana izao raha mila lalao haingana amin'ny sari-tany kely isika. Izy io dia amin'ny 3D ary manana kalitao ampy hahazoana hooked sy hitsapana ireo dinôzôro samihafa miaraka amin'ny fahaizany voajanahary araka ny habeny, ny hafainganana ary ny fahaizan'ny fitaovam-piadiana.
Un Milalao tena ao Etazonia aho noho ny antony tsy maintsy hiatrehantsika mpilalao hafa Tombanana hoe iza no mamono antsika amin'ny alina Isaky ny maraina dia mila mitsara olona isika na manao azy ireo ho tsy manan-tsiny arakaraka ny safidin'ny mpilalao.
Un Lalao shooter fomba fijery Isometrika izay hahafahantsika mamoaka manohitra mpilalao hafa miaraka amin'ny ekipantsika. Mpitifitra iray izay tsy maintsy refesintsika tsara ny fihetsintsika ary io fomba fijery ambony io dia ahafahantsika manao karazana tetika hafa. Tena tsara amin'ny tontolon'ny sari-tany.
Tacticool - mpitifitra 5v5
Kintana iray mamirapiratra an'i Supercell Amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra antsika amin'ny lalao 3V3 amin'ny lalao iray izay fehezintsika ny toetrantsika ary mila manampy ny mpiara-miasa amintsika isika handresy. Lalao haingam-pandeha miaraka amina hetsika marobe ary miaraka amin'ny fahalalana ara-teknika, fahitana an-tsary an'i Supercell rehetra ary, mazava ho azy, amin'ny fanangonam-bola amin'ny freemium.
Handeha isika a lalao tena milamina izay hifandimbiasana afaka hiatrika mpilalao hafa isika amin'ny lalao kilalao majika sy mamitaka fantatry ny rehetra. Afaka manana lalao maromaro miaraka amin'ny namana maro isika amin'ny fotoana iray ary mampiseho ny fahaizantsika amin'ny famoronana teny. Ah, amin'ny Espaniôla izy io.
Y amin'izao fotoana izao no tsara indrindra amin'ny boaty fasika RPG feno tanteraka izay nohavaozina vao haingana miaraka amin'ny fanavaozana izay nanatsara ny interface mba hifehezana ny toetrantsika. Azonao atao ny manamboatra asa tanana, mamorona ny tranonao, mizaha ny zohy ary toy ny hoe Minecraft an'ny 2D io. Ary eny, manana multiplayer koa izy io. Premium izy io, nefa mahafinaritra.
Nintendo farany nandefa multiplayer an-tserasera ho an'ny lalao amin'ny fotoana tena izy tamin'ny fiandohan'ny taona lasa. Io dia namela anay hilalao miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny fotoana iray ary hampiasa ny sasany amin'ireo endri-tsoratra Nintendo malaza toy ny Mario lehibe. Iray amin'ireo zavatra ilaina amin'ny lisitra ho toy ny lalao fifaninanana kart. Ary maimaim-poana amin'ny freemium be dia be.
iray hafa amin'ireo lalao an-tserasera farany tsara indrindra ary izany miandry ny fandefasana vaovao izahay hitondra antsika amin'ny kalitao hafa amin'ny sary sy fanatsarana ny lalao toy ny mekanika ao aminy. Ny battle royale amin'ny fotony izay afaka naneho fa zavatra tena tsara dia azo atao amin'ny finday.
PUBG MOBILE: Taorian'izany
Clash Royale dia manohy mikendry avo ary mbola iray amin'ireo lalao an-tserasera malaza indrindra. Ho afaka hiatrika lalao mahafinaritra amin'ny mpiara-miasa ianao mba hampiofanana sy handeha hilalao miaraka amin'ireo trozona izay mandany sy mandany euro amin'ny karany. 1V1 izay misitrika ao anaty rano mandra-pandresinao ny fetrany freemium.
Blizzard dia anisan'ireo voalohany namoaka lalao karatra fihodinana 1V1 ho an'ny Android ary io dia nahafahany niatrika ilay tafio-drivotra tonga teo aminy niaraka tamin'ny GWENT sy Legends of Runeterra avy amin'ny Riot Games. Izy io dia mbola tsara endrika amin'ny lalao cross-play eo amin'ny PC sy ny finday.
Niverina tamin'ny entana ny Tencent Games nilaza fa raha nahavita nandefa ilay PUBG Mobile lehibe izy io, sahy niaraka tamin'ny COD ihany koa izy. Ary nahavita izany tamin'ny fomba iray izay nanjary iray amin'ireo mpitifitra an-tserasera tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Mahavariana fotsiny amin'ny ambaratonga rehetra.
Eny izao mirary fihavanana sy fihavanana amin'ny namana sasany izahayAzontsika atao koa ny mifanakalo varotra amin'izy ireo na mamorona manodidina mba hahafahantsika mivarotra amin'ny vokatra vokarin'ny toeram-pambolentsika. Avy amin'ny Supercell ary efa nandritra ny taona maro tao amin'ny Android, noho izany dia mankafiza miala sasatra miaraka amin'ny freemium sy ireo mpiara-miasa aminao.
Fihazakazahana amin'ny échec
Nitsambikina tamin'ny lamasinina haingam-pandeha indray ny Tencent Games inona ny lalao tabilao fanaovana écheche tao anatin'ny roa taona lasa. Izy dia nahomby ampy ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny karazana. Mazava ho azy, afaka mihaona amin'ireo mpiara-miasa aminao ianao hilalao an'ity Chess Rush ity amin'ny Internet.
Ary na dia tsy ao amin'ny Play Store aza, azontsika atao ny misintona lalao iray hafa tsara indrindra amin'ny Internet hilalao miaraka amin'ny namana amin'ny Internet. Raha ny tena izy nanjary kianja filalaovana sy zaridainan'ny mpilalao marobe azon'izy ireo atao ny mankafy amin'ny findainy. Iray amin'ireo battle royale tsara indrindra.
Fampidinana Fortnite - Epic Games
Manangana ekipa Pokémon tsara indrindra amin'ny lalao 3V3 an'ny Wow ary entin'izy ireo any amin'ny iray amin'ireo lalao malaza indrindra izay ananantsika amin'ny kolotsaina pop ankehitriny. Nintendo eto dia nametraka ny hena rehetra tamin'ny nendasina mba hankafizany azy.
Developer: DeNA Co, Ltd
iray hafa ny lalao izay nanjary ampahany manan-danja tamin'ny taranaka maro an'ny mpilalao ary ny fisehoany toratelo dia nahasarika ny mponina sy ny olon-tsy fantatra. Ao amin'ny Android isika dia manana izany amin'ny fotony rehetra sy amin'ireo Minecraft Realms hahafahantsika mandoa isam-bolana ho an'ny mpizara iray izay ahafahantsika mihaona amin'ireo mpiara-miasa sy namantsika. Mandoa, mazava ho azy.
FONDRAN'ANDRIAMANITRA Uχ Làlana maizina
Ahoana raha Izahay dia mitady ny majika an'i Disney miaraka amin'ny tsangambaton'ny Square EnixMeloka noho ny sagasy goavambe toy ny Final Fantasy na Dragon Quest, manana an'ity Kingdom Hearts ity izahay ho toy ny lalao RPG tsy manam-paharoa izay ahafahantsika milalao lalao amin'ny orinasa tsara indrindra.
Developer: Ny orinasa SQUARE ENIX INC
Uno amin'ireo MMO be mpitia indrindra amin'izao fotoana izao ary izany dia mamela antsika hanangona sy hanana ny sahaninay hanangona voankazo sy izay karazana mamela antsika hanao ody majika. Miaraka amin'ny fomba fijery ambony sy asa tsara eo amin'ny fahitana dia ilaina iray hafa izany raha te ho tonga ao anatin'ny vondron'olona mpilalao isika.
Mahery & majika: Chess Royale
Iray amin'ireo lalao chess royale mahaliana indrindra amin'ny zavatra niainanao Battle Royale mpilalao 100 izay ametrahana antsika eo alohan'ireo mpifaninana isan-karazany mandra-pahatongantsika any amin'ireo farany ary hiatrehantsika ny tsara indrindra. Mazava ho azy, afaka milalao miaraka amin'ny mpiara-miasa ianao ary mahita ny tenanao ho anisan'ireny.
Ny zava-misy izany afaka manana lalao PvP amin'ny mpilalao hafa aza isika Hitondra antsika any amin'ny anime malaza be io mba hankafizantsika traikefa lavorary amin'ny sarimiaina sy ady.
Uno amin'ireo lalao birao malaza indrindra nanananay hatrizay ary manana izany izahay amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola tokana ho lalao premium. Azontsika atao ny milalao amin'ny Internet mifanohitra amin'ireo mpiara-miasa sy namana izay manana izany koa. Ny traikefa lalao kilalao dia azo alaina feno.
Lalao birao MONOPOLY-Classic
Developer: Lalao Marmalade Lalao Studio
Uno an'ny mpamafa an-tserasera an-tserasera farany tsara indrindra misaotra ny fahatsorany sy ny mekanika. Ny sasany amin'ireo mpiara-miasa aminao, na ny tenanao, dia ilay saboteur izay tokony ho hitanao alohan'ny hamonoany azy rehetra ary manimba ny mpiasan'ny sambo iray manontolo.
Raha mitady a Lalao an-tserasera marobe marobe handrobohana anao mandritra ny volana sy taona maro, ity ny EVE Echoes. Avy amin'ny EVE Online an-tserasera lehibe amin'ny PC, hitondra anao any amin'ny traikefa an-habakabaka tsy manam-paharoa ianao ady intergalactic mahery setra manerana ny rafi-kintana 8.000. Bibidia tsotra izao ary milalao miaraka amin'ny vondron'olona mpilalao na izay mety ho foko na federasiona.
Developer: Lalao NetEase
Riot Games farany nitondra ny lalao eSports quintessential ambony latabatra nandritra ny taona maro izao ary ananantsika izany amin'ny fanjakana mety indrindra. Lalao 5V5 MOBA amin'ny lalao avo lenta jereo izay jerenao. Amin'ny Espaniôla izy io, koa ampidinoo izany miaraka amin'ireo hevitra tsara efa mihoatra ny 1 tapitrisa ao anatin'ny fotoana fohy.
Avy amin'ny Lalao Riot ihany, Legends of Runeterra no iray hafa lalao karatra an-tserasera izay afaka nanaloka ny Heartstone lehibe. Fampisehoana tsara miaraka amin'ny atiny mahazatra sy lalao amin'ny teny espaniola izay ahafahanao milalao hatramin'ny fotoana voalohany.
Misaotra ny mpiara-miasa aminao dia afaka mametraka ny Genshin Impact amin'ity lisitra tsara indrindra ity izahay lalao an-tserasera hilalao amin'ny namana. ny Tontolo malalaka misokatra miaraka amin'ny ady feno herisetra ary tena tanterahina tsara ary izany dia iray amin'ireo fahatsapana eo amin'ny tontolon'ny lalao.
Navoaka herinandro vitsivitsy lasa izay, arcade goavambe ho an'ny lalao 3v3 amin'ny sarintany izay tsy maintsy hanjakantsika amin'ny faritra afovoany hiarovana azy amin'ny mpilalao hafa. Lalao haingana 4 minitra izay raha mandresy isika dia ho afaka handroso haingana kokoa hanatsara ny maherifonay tsy voahidy.
Developer: Lalao LINE
GWENT: Ny lalao Karana Witcher
iray hafa amin'ireo lalao karatra tsara indrindra ankehitriny ary izany dia avy amin'ny CDProject for Android. Ento ny tsara indrindra amin'ny saga The Witcher mba tsy handiso fanantenana ny tontolo lalao tonga lafatra ary ny fampisehoana ny hatsaram-panahy amin'ny sary sy ny haitao. Saika tsy resy.
Magic: ny kianja Fivoriana
Ary ho an'ny lalao karatra lehibe toy ny GWENT na Legends of Runeterra na Hearthstone, mpanohitra hafa no nivoaka, Magic the Gathering, izay manana kalitao avo lenta sy fampisehoana singa teknika, na avy amin'ny PC aza, dia lasa iray amin'ireo lalao 1V1 tsara indrindra an-tserasera ankehitriny.
Magic: Ny kianjan'ny fanangonana
Developer: Mpamosavy an'ny Coast LLC
iray hafa Lalao Nintendo go-kart fa ny fiandrasana ny lalao multiplayer an-tserasera amin'ny hazakazaka dia afaka nanakorontana ny mpilalao tamin'ny Mario Kart Tour. Izy io dia mirehareha amin'ny kalitaon'ny fahitana sy ara-teknika tsara ho an'ireo hazakazaka haingana hilalao miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Internet.
Y Vitanay ity lisitry ny lalao an-tserasera tsara indrindra nilalao tamin'ny namana ity miaraka amin'ny fahatsapana iray hafa tamin'ny taon-dasa 2020. Zeptolab, zatra lalao ankamantatra, dia namoaka an'ity Bullet Echo ity izay mametraka antsika amin'ny lalao royale amin'ny ady amin'ny hafa amin'ny fomba fijery ambony ary ahafahan'ny olona mifehy tsara, hamela antsika hahazo fihazonana ny fandresena. Andramo izao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao ary raha mila lalao ho an'ny finday roa ianao...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Android 39 tsara indrindra hilalaovana amin'ny namana amin'ny Internet